ch9လုကာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch9လုကာ
9:1 ထိုအခါတကျိပ်နှစ်ပါးသောတမန်တော်အတူတကွတောင်းဆိုထား, ထိုသူအပေါင်းတို့နတ်ဆိုးများကိုကျော်အာဏာနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ပေး. ရောဂါများကိုပျောက်ကင်းစေရန်.
9:3 ထိုသူတို့အားဆို၏: "သင်တို့သည်လမ်းခရီးဘို့အဘယ်အရာကိုမျှမယူသင့်ပါတယ်, မပြုရန်ထမ်း, မဟုတ်သလိုခရီးသွားလာအိတ်, ပေါင်မုန့်မရှိ,, မဟုတ်သလိုပိုက်ဆံ; သငျတို့နှစ်ဦးကိုအင်္ကျီများမပြုလုပ်သင့်.
9:4 သမျှအိမျသို့သင်မဝင်ရကြ, အဲဒီမှာတည်းခို, အဲဒီမှာကနေကွယ်ပျောက်မရွှေ့ဘူး.
9:5 အကြင်သူသည်သင့်ကိုခံရကြပြီမည်မဟုတ်, ထိုမြို့သည်ထံမှ ထွက်. အပေါ်သို့, သင်တို့၏ခြေကိုအပေါ်ကိုပင်မွမှေုနျ့ကိုခါလိုက်ကြလော့, သူတို့တဘက်၌သက်သေဖြစ်စေခြင်းငှါအဖြစ်။ "
9:6 ထိုအထွက်, သူတို့ပတ်ပတ်လည်ခရီးထွက်, မြို့ရွာမှတဆင့်, ဧဝံဂေလိနှင့်နေရာတိုင်းတွင်ကုသ.
9:7 ဟေရုဒ်စော်ဘွားသူ့ကိုပြုခံရသမျှသောအရာတို့သည်ထိုအကြောင်းကိုကြားသိ, ဒါပေမဲ့သူသံသယ, ကပြောသည်ကြောင့်
9:8 တချို့, "ဆရာယောဟန်သည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူပြီအကြောင်းမူကား,"ကျသေးသညျအမှနျတကယျ, အခြားသူတွေက, "ဧလိယသည်ထင်ရှားပြီ,"နှင့်နေဆဲအခြားသူများအားဖြင့်, "ရှေးအထဲကနေပရောဖကျတအကြောင်းမူကား, နောက်တဖန်ထမြောက်တော်မူပြီ။ "
9:9 ဟေရုဒ်မင်းကဆိုသည်: "ငါယောဟန်သည်ခေါင်းဖြတ်သတ်. သို့ဖြစ်., ဒါဘယ်သူလဲ, အဘယ်သူကိုနှင့် ပတ်သက်. ဒီလိုအမှုအရာနားထောငျတျော?"ထိုအခါသူကသူ့ကိုကြည့်ဖို့ရှာသောအခါ.
9:10 ထိုအခါတမန်တော်ပြန်လာသောအခါ,, သူတို့အထံတော်သို့သူတို့ပြုသမျှသောအရာတို့ကိုရှင်းပြခဲ့. သူနှင့်အတူသူတို့ကိုယူပြီး, သူဆိတ်ကွယ်ရာတောအရပျမှနုတ်ထွက်, အရာဗက်ဇဲဒပိုင်ဆိုင်.
9:11 သို့သော်လူအစုအဝေးဒီသဘောပေါက်ပြီးမှ, သူတို့သညျလိုကျ. ထိုမင်းသည်သူတို့ကိုလက်ခံနှင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းပွောဆိုကွလြှငျ. ကုသလိုအပ်နေခဲ့ကြသောသူနှင့်ထို, သူကအနာကိုငြိမ်းစေ.
9:12 ထိုအခါတစ်ရက်ကျဆင်းစတင်. နှင့်အနီး drawing, တကျိပ်နှစ်ပါးအထံတော်ကဆိုပါတယ်: "လူအစုအဝေးဖယ်ထုတ်ပါ, သောကြောင့်, ပတျဝနျးကငျြမြို့ရွာသို့သွားသဖြင့်, သူတို့အစားအစာကိုခွဲခြားနှင့်တွေ့ပါစေခြင်းငှါ. ကျနော်တို့တောအရပျထဲမှာကဒီမှာဖြစ်ကြ၏။ "
9:13 ဒါပေမယ့်သူကထိုသူတို့အားပြောဆို, "သင်။ သူတို့ကိုစားရန်တစ်ခုခုပေး" ထိုသူတို့ကဆိုပါတယ်, "ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမုန့်ငါးလုံးနှငျ့ငါးနှစျထက်မပိုရှိပါတယ်, မဟုတ်လျှင်ဖြစ်ကောင်းကြှနျုပျတို့သညျသှားဒီတစျခုလုံးကိုလူအစုအဝေးအဘို့စားစရာကိုဝယ်ခြင်းငှါရှိပါတယ်။ "
9:14 အခုတော့ယောက်ျားငါးထောင်မျှလောက်ရှိရှိကြ၏. ဒါကြောင့်သူကသူ့တပည့်တို့အားဆို၏, "သူတို့ငါးဆယ်အုပ်စုများအတွက်စားရန်လျောင်းပါ။ "
9:15 ထိုသူတို့ပြု. ထိုသူတို့ကသူတို့အားလုံးကိုစားရန်လျောင်းစေ.
9:16 ထိုအခါ, မုနျ့ငါးလုံးနှငျ့ငါးနှစျတာ, သူကကောင်းကင်သို့တက်စိုက်ကြည့်, သူမင်္ဂလာရှိနှင့်ဖဲ့နှင့်သူ၏တပည့်ဖို့သူတို့ကိုဖြန့်ဝေ, လူအစုအဝေးတို့ရှေ့မှာ ထား. နိုင်ရန်အတွက်.
9:17 ထိုသူအပေါင်းတို့သည် စား. ဝကြ. နှင့်အပိုင်းအစများဆယ်နှစ်တောင်းတက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်, ရာသူတို့ထံမှကျော် left ခဲ့ကြသည်.
9:18 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, သူတစ်ဦးတည်းဆုတောင်းသည့်အခါ, ပည့်တော်တို့သည်လည်းသူနှင့်အတူရှိကြ၏, သူကသူတို့ကိုမေးခွန်းထုတ်, ဟုဆို: "ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုငါသည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြ?"
9:19 ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြန်ဖြေသဖြင့်ဟုဆို: "ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်. ဒါပေမဲ့တချို့ဧလိယသည်ဆိုသ. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, အခြားသူများထံတော်မှပရောဖကျတစျဖနျထမြောက်တော်မူပြီဟုဆိုသည်။ "
9:20 ထိုအခါသူတို့ပြောဆို, "ဒါပေမယ့်ငါဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့အဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြ?"တုန့်ပြန်ခုနှစ်တွင်, ရှိမုန်ပေတရုက Said, "ဘုရားသခငျ၏ခရစ်တော်အား။ "
9:21 သို့သော်ထိုသူတို့အားသိသိသာသာစကားပြော, သူမည်သူမဆိုရန်ဤပြောပြရန်မဟုတ်သူတို့ကိုညွှန်ကြားထား,
9:22 ဟုဆို, "လူသားသည်အကြောင်းမူကားများစွာသောအရာများကိုပင်ဆင်းရဲခံရမည်, နှင့်အသက်ကြီးသူတို့နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်းကိုခံရ, အသေသတ်ခြင်းကိုခံရ, တဖန်တုံသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌မြင့်တက်အပေါ်။ "
9:23 ထို့နောက်သူကလူတိုင်းကပြောပါတယ်: "မည်သူမဆိုငါ့နောက်ကြွလာရန်ဆန္ဒရှိသည်ဆိုပါက: သူ့ကိုဖြင့်ကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ကြကုန်အံ့, နှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုတက်ယူ, ငါ့နောက်သို့လိုက်.
9:24 သူ၏အသက်တာသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်သောသူသည်, ရှုံးလိမ့်မည်. သို့သျောလညျးငါ့ကွောငျ့မိမိအသက်တာကိုမည်သူမဆိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်, ကကယ်တင်မည်.
9:25 ဘယ်လိုလူတအကျိုးခံစားရပါဘူးများအတွက်, သူကလောကဓာတ်လုံးကိုရဖို့ရန်ဖြစ်လျှင်, သေးကိုယ်တော်တိုင်ဆုံးရှုံး, သို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူအန္တရာယ်ဖြစ်စေ?
9:26 ငါ့ကိုငါ့စကားကြောင့်ရှက်ကြလိမ့်မည်သောသူသည်: အထံတော်၌လူသားသည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဖြစ်လိမ့်မည်, သူသည်မိမိတန်ခိုးအာနုဘော်နှင့်သူ၏အဘခမည်းတော်၏အတွင်းနှင့်သန့်ရှင်းကောင်းကင်တမန်၏ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါပြီမည်သည့်အခါ.
9:27 သေး, ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦးအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား: အသေသတ်ခြင်းကိုမြည်းစမ်းရမည်မဟုတ်သူကိုဤနေရာတွင်အချို့သောရပ်တည်မှုရှိပါတယ်, ထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရအထိပါပဲ။ "
9:28 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, အကြောင်းရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ဟောပြောသောဤစကားကိုပြီးနောက်, သူပေတရုနှင့်ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကိုယူ, သူကတောင်ပေါ်သို့တက်သွားလေ၏, သူဆုတောင်းပဌနာစေခြင်းငှါဒါ.
9:29 ထိုမင်းသည်ကြာမြင့်စွာဆုတောင်းနေစဉ်, သူ့အမကျြနှာ၏အသွင်အပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်, နှင့်သူ၏အဝတ်အဖြူဖြစ်လာပြီးထွန်းလင်း.
9:30 ထိုအခါ, လူနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုနှင့်အတူစကားပြောခဲ့ကြ. ထိုမောရှေနှင့်ဧလိယသည်ရှိကြ၏, တန်ခိုးအာနုဘော်ရှိထင်ရှားကျော်ကြားသော.
9:31 ထိုသူတို့ကမိမိအထွက်ခွာသွားပြောခဲ့တဲ့, တော်မူသောသူယေရုရှလင်မြို့၌ပွီးမွောကျမယ်လို့.
9:32 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, ပေတရုနှင့်သူနှင့်အတူဖြစ်နှင့်သောသူတို့အိပ်နေဖြင့်ဆင်းအလေးချိန်ခဲ့သည်. ထိုအတပ်လှန့်ဖြစ်လာ, သူတို့ကသူ့တန်ခိုးအာနုဘော်နှင့်သူ၌ရပ်နေသောလူနှစ်ယောက်ကိုမြင်လျှင်.
9:33 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, ဤသူတို့သည်အထံတော်က ထွက်. ခဲ့ကြသည်အဖြစ်, ပတေရုသညျယရှေုကလညျး,: "အရှင်ဘုရား, ကျွန်တော်တို့ကိုဤနေရာတွင်ဖြစ်ရန်အဘို့အကောင်းပါ၏. ဆိုတော့, ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးတဲစေ: သင်တို့အဘို့အတစျခု, မောရှသေညျအဘို့တယောက်, သူဟူမူကားခဲ့ရာဧလိယကတ။ "မသိခဲ့ပါများအတွက်.
9:34 ထိုအခါ, သူသည်ဤအမှုအရာဟူမူကားခဲ့သည်အဖြစ်, မိုဃ်းတိမ်သူတို့ကိုတို့သည် လာ. လွှမ်းမိုး. ထိုမိုဃ်းတိမ်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်, ကြောက်လန့်.
9:35 ထိုအကအသံမိုဃ်းတိမ်မှလာ, ဟုဆို: "ဤသူကားငါ၏ချစ်ရာသခင်သည်သားဖြစ်၏. သူ့ကိုနားထောင်ပါ။ "
9:36 ထိုစကားသံကိုပြုတတ်ကြ၏ခံနေစဉ်, ယရှေုသညျတယောက်တည်းဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်. ထိုသူတို့ကတိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ဘယ်သူမျှမကိုပြောသည်, ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, ဤအရာမဆို, သောသူတို့မြင်ဘူး.
9:37 သို့သော်ထိုသို့အောက်ပါနေ့၌ဖြစ်ပျက်, သူတို့ကတောငျပျေါမှဆငျးသခဲ့ကြသည်အဖြစ်, လူအုပ်ကြီးသူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့.
9:38 ထိုအခါ, လူအစုအဝေးအနေဖြင့်လူတဟစ်, ဟုဆို, "အရှင်ဘုရား, တောင်းပန်ပါတယ်, ငါ၏အသားကိုကြင်နာစွာကြည့်ရှု, သူသည်ငါ၏သာသားဖြစ်၏များအတွက်.
9:39 ထိုအခါ, စိတျဓာတျကသူ့ကိုကိုင်ယူ, သူရုတ်တရက်အော်ဟစ်, ထိုသို့သူ့ကိုချပစ်ခြင်းနှင့်သူ့ကို convulses, သူ foams နိုင်အောင်. ထိုသို့မပါဘဲသူ့ကိုမျက်ရည်သော်လည်း, ကသာအခက်အခဲနှင့်အတူသူ့ကိုအရွက်.
9:40 ငါသည်ထိုသူကိုနှင်ထုတ်ရန်သင့်တပည့်ကိုမေးမြန်း, သူတို့နိုင်ခြင်းကြတယ်။ "
9:41 နှင့်တုန့်ပြန်, ယရှေုသညျဟုပြောသည်: "အိုသစ္စာမဲ့ခြင်းနှင့်ကောက်သောမျိုးဆက်! အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိနှငျ့သငျခံနိုငျရလိမ့်မယ်? ဒီနေရာမှာသင်၏သားကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ "
9:42 ထိုမင်းသည်သူ့ကိုချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်, နတ်ဆိုးသူ့ကို ချ. သူ့ကိုတောငျ့မာစပွေီး.
9:43 ယရှေုသညျညစ်ညူးသောနတ်ကိုဆုံးမ, သူသည်လည်းသူငယ်ကိုချမ်းသာစေ, သူသည်မိမိအဘထံသို့သူ့ကိုပွနျလညျထူထောငျ.
9:44 ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုဘုရားသခငျ၏တန်ခိုးအာနုဘော်ကြောင့်မိန်းမောတွေဝေခဲ့ကြ. လူတိုင်းကသူလုပ်နေခဲ့သမျှသောအကျော်အံ့သြခဲ့ပါတယ်အဖြစ်, သူသည်မိမိတပည့်ကပြောပါတယ်: "သင်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုဤစကားသတ်မှတ်ရပါမည်. ဒါကြောင့်လူသားသည်လူတို့လက်သို့အပ်လိမ့်မည်ဟုလိမ့်မည်။ "
9:45 ဒါပေမဲ့သူတို့ကဤစကားလုံးနားမလည်ခဲ့ဘူး, ထိုသို့သူတို့မှဖုံးကွယ်ခဲ့သည်, သူတို့ကမရိပ်မိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်. ထိုသူတို့ကဤစကားလုံးအကြောင်းသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်ဝံ့ကွ.
9:46 သူတို့ကိုသို့ဝငျအခုစိတ်ကူးတစ်ခု, ကြီးသူတို့အသောအဖြစ်.
9:47 သို့သျောယရှေု, သူတို့၏စိတ်နှလုံး၏အကြံအစည်သိ, ကလေးတစ်ဦးကို ယူ. သူ့ကိုအနားမှာသူ့ကိုရပ်လျက်.
9:48 ထိုသူတို့အားဆို၏: "အကြင်သူသည်ငါ၏နာမ၌ဤကလေးလက်ခံရရှိလိမ့်မည်, ငါ့ကိုလက်ခံ; အကြင်သူသည်ငါ့ကိုလက်ခံ, ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူအားလက်ခံတွေ့ဆုံ. သင်တို့ရှိသမျှတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူအဘို့, တူညီတဲ့ကြီးမြတ်ဖြစ်၏။ "
9:49 ထိုအကိုတုံ့ပြန်, ယောဟနျသကပြောပါတယ်: "အရှင်ဘုရား, ငါတို့သည်သင်တို့၏နာမ၌နတျဆိုးတို့ကိုနှငျထုတယောတစျကိုမွငျလြှငျ. ထိုအခါငါတို့သည်သူ့ကိုအတားမြစ်သည်, သူအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူမလိုကျဘူးသည်။ "
9:50 ထိုအယရှေုကလညျး: "သူ့ကိုမတားမြစ်ပါနဲ့. သင်တို့တဘက်၌မဖြစ်သောသူသည်, သင်တို့အဘို့အဖြစ်၏။ "
9:51 အခုတော့ကြောင့်ဖြစ်ပျက်, မိမိအလွန်ကျူး၏လက်ထက်၌ပြီးစီးခဲ့ခံရစဉ်တွင်, သူစေ့စေ့ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားသူ၏မျက်နှာ ထား..
9:52 မိမိမျက်နှာရှေ့မှာစေလွှတ်. ထိုအသွား, သူတို့ကရှမာရိမြို့တမြို့ထဲသို့ ဝင်., သူ့အဘို့ပြင်ဆင်ထားရန်.
9:53 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုမခံမယူမယ်လို့, သူ၏မျက်နှာသည်ယေရုရှလင်မျက်နှာသို့သွားခဲ့သောကြောင့်,.
9:54 သောအခါတပညျ့တျောတို့သ, ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်, ထိုအမှုကိုမြင်ခဲ့သည်, သူတို့ကဆိုပါတယ်, "သခင်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကောင်းကင်ကနေဆင်းဖို့မီးမွေးဘို့မခေါ်နဲ့သူတို့ကိုလောင်ချင်ပါဘူး?"
9:55 ထိုအလှည့်, သူကသူတို့ကိုဆုံးမတျောမူ, ဟုဆို: "သင်သည်အဘယ်သူ၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်သင်၏မသိကြ?
9:56 လူသားတို့သည် လာ., ဘဝဖျက်ဆီးဖို့မ, ဒါပေမဲ့။ သူတို့ကိုကယ်တင်ပါ "ထိုသူတို့ကအခြားမြို့သို့ သွား. ရန်.
9:57 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, သူတို့လမ်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်သွားခဲ့ကြသည်အဖြစ်, တစ်စုံတစ်ဦးကသူ့ကိုအားဆို၏, "ငါသည်သင်တို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်, သွားလေရာရာ၌သင်တို့သွားလိမ့်မည်။ "
9:58 ယရှေုကလညျး: "ကငျြလညျတွင်းများ, နှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်အသိုက်များ. သို့သော်လူသားသည်မိမိခေါင်းပေါ် တင်. ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်။ "
9:59 ထိုအခါသူသည်အခြားဖို့ကဆိုသည်, "။ ငါ့နောက်သို့လိုက်" ဒါပေမယ့်သူကပြောသည်, "သခင်, သွားနှင့်ငါ့အဘသည်သင်ျဂွိုဟျမှပထမဦးဆုံးအကြှနျုပျကိုခွင့်ပြု။ "
9:60 ထိုအယရှေုကလညျး: "အသေကောင်အသေကောင်ကိုသင်္ဂြိုဟ်ပါကြစို့မိမိတို့အ. သို့သော်သင်သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့သွားနှင့်ကြေညာပါတယ်။ "
9:61 နှင့်အခြားကပြောပါတယ်: "ငါသည်သင်တို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်, သခင်ဘုရားသည်. ဒါပေမယ့်ငါ့အိမ်သူတို့အားရန်ဤရှင်းပြဖို့ပထမဦးဆုံးအကြှနျုပျကိုခွင့်ပြု။ "
9:62 ယရှေုကလညျး, ထိုလယ်ထွန်ရန်မိမိလက်ကိုထည့်လေ့မရှိသူအ "ဘယ်သူမှမ, ပြီးတော့နောက်ကျောကိုကြည့်, ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်အဘို့မထိုက်မတန်သည်။ "